Waaciye - Wikipedia
Waaciye() (), Waa degmo ka tirsan gobolka Bari Waxay dhacdaa meel u dhexeysa Magaalooyinka Boosaaso iyo garoowe. Wareegto Dowladdii dhexe ee Soomaaliya soo saartay 1990 ayaa Waaciye loogu magcaabay degmo, Wareegtadaas ayaan si buuxda u fulin maadaama dowladdu dhacday wax yar ka dib.
Ku bilaabmay Goob ganacsi
• Duqa Degmada
Xirsi Siciid Faarax (Xirsi Gaataa)
Waaciye waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1929-1930, Xiligaasoo niman Ganacsato ah oo sharaa'ik xoolaha dhoofiya lahaa ay ka dhiseen Berkedo iyo dhawr guri. Ganacsatadaas oo kala Ahaa
Axmed Xasan Fiqi
Jaamac Xasan Fiqi
Geedi Aadan Sugule &
Maxamuud Aadan Sugule
Waaciye wexey ku taal barta ay iska gooyaan dhigta 10.0166667° iyo loolka 49.0333333°. Waaciye wexey degmo u tahay oo ay xukuntaa Xidda, Qayaadsame, Juurile, Dalweyn Sheerbi iyo baadiyaha ku xaydaaman tuulooyinkaas oo ay reer miyigu degaan.
Dhul aad u ballaaran oo ay reer miyi ku nool yihiin ayaa ka xiga bariga iyo galbeedka. Dhulkaas iyo tuulooyinka ku xaydaaman waaciye wexey kala yihiin:
• Togga Waaciye oo waqooyi bari ka mara
•	Candha bahal iyo Cuunka ayaa waqooyi galbeed ka xiga
•	Xidda iyo sheerbi oo koonfur ka xiga
•	Togga geri fud
•	Qayaadsame oo waqooyi bari ka xiga
•	Togga Gurran
•	Mashax Goble
•	Kal Midgood
•	Dundun Garab Cad
• Dhidhin canjeelle
• Xeradaa mudulo
•	Bilcil geel jecel
•	Far Meygaag
•	Gob Xiddo
•	Damal joogle
•	Karin lafale
•	Karin gubad
•	Samaysa dheer
iyo weliba kuwa kale oo liiskan ka maqan. Waaciye waxaa marta waddada weyn ee isku xirta waddanka labadiisa cirif, bari iyo koonfur. Degmadu aad ayey sanadadan dambe u dhismaysey oo guryo qurxoon oo magaalada bilicdeeda bilaya ayaa la mooddaa iney meelo badan ka muuqanayaan.
Degmadu wexey leedahay cusbitaal weyn, dugsi sare, dugsi hoose-dhexe iyo machad waxbarasho. Degmada waxaa ku yaalley laba hoteel oo saaran waddada weyn ee dhexmarta degmada. Degmadu wexey leedahay saylad xoolaha lagu kala iibsado oo ay dhir badani deyr u tahay. Degmadu wexey leedahay dukaamo, farmashiyayaal, xawaalad, ceel biyihiisa la sifeeyo, biibitooyin shaah, Bakhaarro cunto, Berkedo badan, afar masaajid iyo laba kale oo dhismohooda la bilaabay taasoo ka dhigi doonta tirada masaajidyada lix xabbo.
Degmadu wexey u fideysaa dhanka koonfureed ee ay tuulada xiddo xigto.
Dhanka waqooyi bari waxaa ka soo xiray togga Waaciye kaasoo xilliyada roobka goosta dhul badan una dureera dhanka haracley isagoo jirid siibaya dhirta nawaaxigaas ku taalla.
Waaciye waa degmo jawigeedu aad u wanaagsan yahay taasoo keenta in dad badni yimaadaan xilliga xagaaga, Xilligaas oo dad badni ka soo xagaa baxaan Boosaaso kululaylka ka jira awgiis. --Cabdirashiid 22:30, 10 Oktoobar 2011 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Waaciye&oldid=201927"
Last edited on 7 Juun 2020, at 12:02
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Juun 2020, marka ee eheed 12:02.